Kpọtụrụ anyị - Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd.
Okwu: No.999 Fushan Road, Xiaolan Economic Mpaghara, Nanchang City, Jiangxi 330200, PR China
Mọnde-Sọnde: awa iri abụọ na anọ n'ịntanetị
Ọ bụ ọkachamara emeputa ọkachamara nnyocha na mmepe, mmepụta, ahịa na ọrụ nke ngwaọrụ ọgwụ. Ọ bụ ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ Jiangxi Sanxin Medical Technology Co., Ltd. (ndebiri: Sanxin Medical, koodu ngwaahịa: 300453), na Yunnan Sanxin gbanyere mkpọrọgwụ na Yunnan ga-enyere aka mmepe nke ụlọ ọrụ ahụike mpaghara na ọrụ ahụike; n'otu oge ahụ, ọ ga-arụ ezigbo ọrụ dị ka "akwa mmiri" maka nhazi Sanxin Medical na ndịda ọdịda anyanwụ, na-egosi South Asia na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Companylọ ọrụ ahụ dị na mpaghara Kirin nke Anning Industrial Park, Kunming City, Yunnan Province, nwere ngụkọta nke ihe karịrị mita 60,000; ọ tumadi na-arụpụta disposable elu-ọgwụgwụ infusion usoro na ọbara ọcha usoro ngwaahịa.
Ọ bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ọkachamara na nyocha na mmepe, mmepụta, ire ahịa na nkwado teknụzụ nke usoro hemodialysis nke akụrụngwa ahụike. Ọ bụ onye na - eweta ngwa ngwa hemodialysis na mba ụwa.
Tọrọ ntọala na August 2018, site na isi ndebanye aha nke nde yuan 12, ọ bụ ọkachamara na ịnye ụlọ nkwakọba ihe nke atọ, nkesa, njikwa ọkọnọ na ọrụ ndị ọzọ maka ụlọ ọrụ ahụike na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ. Companylọ ọrụ a dị na mpaghara Xiaolan Economic and Technological Development Mpaghara ma bụrụkwa ndị enyemaka nke ụlọ ọrụ Jiangxi Sanxin Medical Technology Co., Ltd. (koodu nchekwa: 300453).
The ụlọ ọrụ na-tumadi aku nnyocha na mmepe, mmepụta na management nke ọgwụ na ahụ ike; ahia ahia nke akụrụngwa na ihe inyeaka, akụrụngwa akụrụngwa, akụrụngwa, akụkụ ahụ mapụtara na teknụzụ metụtara ya chọrọ maka nrụpụta na nyocha sayensị nke ụlọ ọrụ ahụ, yana nhazi nke ihe ndị dị na ụlọ ọrụ ahụ.
Ningbo Filal Medical Products Co., Ltd. bụ ihe enterprise ọkachamara R&D, mmepụta na ahịa nke disposable cardiothoracic ịwa ahụ na ngwaahịa. Ọ na - ewepu nzacha ọbara na - ewepu ọbara, microembolism nzacha ọbara, na akpa ume obi nwere ike wepu. A na-ere ngwugwu a na-ekesa ekesa (extracorporeal mgbasa tubing), a na-erekwa ọgwụ na-ekpo ọkụ nke cardioplegia na ngwaahịa ndị ọzọ na nnukwu ụlọ ọgwụ na mba ahụ niile, ma ejirila ụlọ ọgwụ na-arụ ọrụ karịa ụlọ ọgwụ 300, ma ha niile enwetawo nsonaazụ na-adịghị mma. Ọdịmma ngwaahịa ahụ dị n'etiti ndị kachasị mma na ụlọ ọrụ ahụ ma nwee aha ọma n'etiti ndị ọrụ.
Sichuan Weilisheng Medical Technology Co., Ltd. ("Sichuan Weilisheng" maka mkpụmkpụ), tọrọ ntọala na 2018, bụ ụlọ ọrụ dị elu ọkachamara na nyocha na mmepe, n'ichepụta, ire ahịa na ọrụ nke ngwaọrụ ahụike. Sichuan Weilisheng bụ ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ Jiangxi Sanxin Medical Technology Co., Ltd. (koodu nchekwa: 300453). Mgbe Sanxin si ulo oru mmepe ụkpụrụ si n'ebe ndịda ruo n'ebe ugwu, ọ nwere ọzọ n'ebe ọwụwa anyanwụ ruo n'ebe ọdịda anyanwụ ulo oru usoro layout, ịdabere na Chengdu Dị ka ihe dị mkpa ehiwe nke "eriri na okporo ụzọ" n'uche, anyị na-agba mbọ na-a na-eduga ọbara ọcha ụlọ ọrụ n'elu ikpo okwu ọrụ na elu ihe ohuru, amamihe na ogo, na-ewusi mmetụta mba ụwa nke ụdị mba.